‘Siyakhalisa isibalo sabenza iMaths ezikoleni’ | IOL Isolezwe
‘Siyakhalisa isibalo sabenza iMaths ezikoleni’
Isolezwe / 17 August 2012, 1:00pm /
UNDUNANKULU wesifundazwe, uDkt Zweli Mkhize, uNgqongqoshe weziMali, uNkk Ina Cronje, noMcwaningi mabhuku jikelele, uMnuz Terence Nombembe ngesikhathi kusayinwa isivumelwano sokusebenzisana phakathi kukaMgcinimafa ne-SAICA eThekwini izolo. Isithombe: ZANDILE SHANGE
UMCWANINGI mabhuku jikelele uMnuz Terence Nombembe ukhala ngesibalo esiphansi sabafundi abenza iMaths ezikoleni.
Uthe kudingeka kwenziwe okuthile ngokushesha ngale nkinga.
UNombembe uthe kudingeka kube nomkhankaso wokugqugquzela abafundi ukuthi benze lesi sifundo ukuze kube lula uma sebengena emanyuvesi.
Usho lokhu nje iningi labafundi liyasilaxaza lesi sifundo lenze iMaths Literacy okwenza babe nenkinga uma sebefika emanyuvesi ngoba abamukelwa ezinye zeziqu abafundi abenza lesi sifundo kudingeka abenza imaths.
“Ziyehla izibalo zabafundi abenza imaths okuyinto okumele isukunyelwe kakhulu kufuqwe imikhankaso ukuze basenze lesi sifundo.
“Inkinga ngothisha abafundisa lesi sibalo yizinga labo elingabazekayo, into edinga uhulumeni ayilungise,” kusho uNombembe.
Ukusho lokhu izolo ngesikhathi ekhuluma esidlweni sasekuseni eThekwini izolo lapho bekusayinwa khona isivumelwano sokusebenzisana phakathi kukaMgcinimafa esifundazweni nenhlangano iSouth African Institute of Chartered Accountants (Saica) ngohlelo lwemifundaze lwale nhlangano iThuthuka Bursay esiza abafundi abafuna ukuba ngabacwaningi mabhuku.
Imaths ne-accounting ngezinye zezifundo ezithathwa njengezinzima ngabafundi kanti nothisha abafundisa lezi zifundo bayashoda kakhulu.
Yingakho umnyango wezemfundo unezinhlelo zemifundaze kothisha abafundisa noma abazofundisa lezi zifundo uma bephothula iziqu zabo.
UNombembe uthe kubalulekile ukuthi kuthathwe abafundi wumasipala ngamunye banikwe amakhono futhi baqeqeshwe ukuba ngabaphathi bezimali ngoba bayadingeka kakhulu.
“Laba bafundi bazothi uma bephothula iziqu bayosebenza kulabo masipala ngoba yilapho bedabuka khona. Abantu abagogodile abathandisisi kahle ukuyosebenza emakhaya,” usho kanje.
UNgqongqoshe weziMali, uNkk Ina Cronje, uthe bayashoda abantu abagogode emkhakheni wezimali kanti nalabo abagogodile abafuni ukuyosebenza emakhaya.
Uthe yize kungomasipala abahlanu kuphela abanconywa nguNombembe ngokusebenzisa kahle izimali kwabangu-61, kudingeka basebenze kanzima ukuze nalaba abanye benze kahle.
“Amabhizinisi azimele kumele abambe iqhaza ngoba uma ngase nje ibhizinisi ngalinye lifundise umfundi oyedwa ngeke lilimale kakhulu ngasezimalini.
“Ithuthuka isiza inqwaba yabafundi minyaka yonke kanti ngizobheka emgodleni ukuthi singabasiza ngezigidi ezingakanani ukuze luqhubeke lolu hlelo,” usho kanje.
UNdunankulu wesifundazwe, uDkt Zweli Mkhize, uthe kubalulekile ukuthi kuqokwe abantu abanamakhono afanele ezikhundleni ngoba noma kungaba nezinhlelo ezinhle kuhulumeni noma komasipala kodwa uma bengekho abantu abanamakhono okuphatha izimali ngeke izinsiza zifinyelele kalula kubantu.